အိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လူနေအိမ်ရာ လုံခြုံမှုများ > အိမ်ဘေးကင်း
လေးလံသော သံမဏိအပြည့်ဖြင့် လုံခြုံသော အရည်အသွေးမြင့် အိမ်သုံး ရုံးသုံး Money Secret MP-670 ကို အသုံးပြုပါ။
LCD မျက်နှာပြင် LS-800-D ပါသည့် ရုံးဘေးကင်းသော့ လျှပ်စစ်လော့ခ်
Weierxin Safes Factory မှ Wholes Home Safe Box MS-600
Foshan Weierxin Sa မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။fe ရုပ်သံလိုင်း။
ဒီဗီဒီယိုမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အရောင်းရဆုံး အိမ်ဘေးကင်းသေတ္တာကို ပြသပေးချင်ပါတယ်။
လက်ဗွေရာ သော့ခတ် ပါရှိပါတယ်။
အတွင်းဘက်တွင် သော့သော့ပါသော ဗီရိုငယ်တစ်ခုရှိသည်။
နှင့် ဖယ်ရှားနိုင်သော စင်တစ်ခု။
တံခါးနားမှာ ခိုင်ခံ့သော မုဆိုး ၄ ခု။
တံခါးကို 180 ဒီဂရီဖွင့်နိုင်သည်။
နောက်ကျောမှာ အပေါက်နှစ်ပေါက်။ နံရံပေါ်ရှိ လုံခြုံသောသေတ္တာကို သင်ပြင်နိုင်သည်။
ထူထဲသော သံမဏိသည် သင့်အတွင်းပိုင်း အရေးကြီးသောအရာများကို ကာကွယ်နိုင်သည်။
2004 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Foshan Weierxin Safe Co., Ltd သည် ထင်ရှားသော ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူဖြစ်သည်။ စိတ်ကြိုက် Safe Box. ဤထုတ်ကုန်များသည် ရေစိုခံမှု၊ တာရှည်ခံမှု၊ လှပသောဒီဇိုင်း၊ ကောင်းမွန်သောအချောထည်နှင့် ဈေးနှုန်းချိုသာခြင်းကြောင့် ဈေးကွက်တွင် အလွန်ချီးကျူးခံရပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် စက်မှုလုပ်ငန်း၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောရောင်းချသူများထံမှရရှိသော အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကုန်ကြမ်းကိုအသုံးပြု၍ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ထုတ်ကုန်များသည် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း ပိုမိုကြာရှည်ပြီး အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကို သေချာစေရန်အတွက် အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုများစွာကို ခံယူရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဖောက်သည်များသည် စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ ဤထုတ်ကုန်များကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
မေး။ ထုတ်ကုန်ကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်မလား။
A: ဟုတ်ပါတယ်။ သင့်လိုအပ်ချက်အရ မတူညီသောအရွယ်အစား၊ ထုပ်ပိုးမှု၊ အရောင်နှင့် လိုဂိုကို ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။
Q. သင်သည် ထုတ်လုပ်သူ သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုလား။
A: ကျွန်ုပ်တို့သည် အန္တရာယ်ကင်းသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။
Q. မင်းရဲ့ MOQ ကဘာလဲ။
A: မော်ဒယ်အလိုက် ကွဲပြားပါတယ်။
1. ကျွန်ုပ်တို့သည် တင်းကျပ်သောထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် စံသတ်မှတ်ချက်စည်းမျဉ်းများကို အမြဲလိုက်နာခဲ့ပြီး နှစ်ဖက်စလုံးအတွက် အချိန်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်ကို ချွေတာပြီး သင့်အတွက် အမြင့်ဆုံးအကျိုးခံစားခွင့်များကို ယူဆောင်လာပါသည်။
2. ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် ISO 9001 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရည်အသွေးအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုအောင်မြင်ပြီးဖြစ်သည်။
3.ကျွန်ုပ်တို့ OEM ကိုထောက်ခံပါတယ်။& ODM ဝန်ဆောင်မှု။
Weierxin Safe အကြောင်း
2004 ခုနှစ်မှစတင်၍ တရုတ်နိုင်ငံ၊ Foshan City၊ Guangdong ပြည်နယ်တွင် တည်ရှိပြီး Foshan Weierxin Safe Co., Ltd သည် ဧရိယာ 23,000 စတုရန်းမီတာကျော်ကို လွှမ်းခြုံထားပြီး ဝန်ထမ်း 100 ကျော်ရှိပြီး ဘေးကင်းလုံခြုံသော ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံ 10 နှစ်ကျော် ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ၎င်းသည် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ အရောင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများပါရှိသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Weierxin Safe သည် မီးခံနိုင်သော မီးခံသေတ္တာများ၊ အိမ်ဘေးကင်းများ၊ ရုံးသုံး မီးခံသေတ္တာများ၊ ဟိုတယ် ဘေးကင်းများ၊ နာရီအကာအရံများ လုံခြုံသော၊ သံမဏိ ဗီရို၊ သေနတ်ဘေးကင်းများ၊ ဖိုင်များ လုံခြုံသော၊ ငွေသားသေတ္တာများ၊ ဗောက်တံခါး နှင့် အခြား မှန်လုံလုံခြုံရေး ထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် CE၊ ROHS၊ FCC နှင့် fireproof လက်မှတ်တို့ကို ကျော်ဖြတ်ပြီးဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ် ထုတ်လုပ်မှုပမာဏ 500,000 ကျော်ဖြင့်၊ အိမ်၊ ရုံး၊ ကျောင်း၊ ဆေးရုံ၊ ဟိုတယ်စသည်ဖြင့် နယ်ပယ်များစွာတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုကြသည်။ Weierxin Safe သည် လူများနေထိုင်၊ အလုပ်နှင့် ကစားသည့်နေရာများတွင် စိတ်အေးချမ်းသာစွာ အကာအကွယ်ပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် အကောင်းဆုံးအတန်းအစားတန်ဖိုး၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူမှု၊ တာရှည်ခံမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ အရည်အသွေးနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ကတိပေးသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်များတွင် အယုံကြည်ရဆုံး၊ ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးသော ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသည်။ Weierxin Safe တွင် ပြည်တွင်းဈေးကွက်တွင် အရောင်းကိုယ်စားလှယ် 1000 ကျော်ရှိပြီး သစ္စာရှိဖောက်သည်5သန်းကျော်ရှိသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်လည်း ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကို တင်ပို့လျက်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြည်တွင်း နှင့် နိုင်ငံခြား အမှတ်တံဆိပ် တံဆိပ်များစွာကို OEM ပေးသွင်းသူ ဖြစ်ပါသည်။ 2004 ခုနှစ်မှ စတင်၍ ထုတ်ကုန်များကို စဉ်ဆက်မပြတ် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် မြှင့်တင်ထားပြီး လိုက်နာရန် သစ္စာရှိ သုံးစွဲသူများလည်း ရှိနေသေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကောင်းမွန်သော OEM ဖြင့် ထုတ်လုပ်မှုအဖွဲ့ကို တည်ဆောက်ထားသည်။& OMD အတွေ့အကြုံ။OEM/ODM မှာယူမှုများကို ကြိုဆိုပါသည်။ R မှာ အားသာချက်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။&ဃ၊ အထူးသဖြင့် မီးခံသေတ္တာများတွင် သုံးစွဲသူဘေးကင်းရေး တပ်ဆင်မှု။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကို လုပ်ကိုင်ရာတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ အတွေ့အကြုံဖြင့်၊ ၎င်းတို့၏ ထုတ်ကုန်၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဒီဇိုင်းနှင့် စီးပွားဖြစ်ပံ့ပိုးမှုတွင် ပေးအပ်ထားသော အတွေ့အကြုံနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော မဟာဗျူဟာမိတ်ဖက်အဖြစ် ရှုမြင်ခံရပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြိုင်ဘက်ကင်းသော အသိပညာနှင့် အတွေ့အကြုံကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး၊ သင့်အား အကောင်းဆုံး စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးဆောင်ပါသည်။
၎င်းတို့အားလုံးကို နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီ ထုတ်လုပ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များသည် ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပဈေးကွက်နှစ်ခုလုံးမှ ထောက်ခံမှုရရှိထားသည်။
ယခုအခါ နိုင်ငံပေါင်း 500 သို့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် တင်ပို့လျက်ရှိသည်။
* ပစ္စည်း: သံမဏိအရွယ်အစား- H670*W440*D390MM* လော့ခ်- မျက်နှာပြင်ပါသော အီလက်ထရွန်းနစ် ဒစ်ဂျစ်တယ်သော့ခတ်* အထူ- တံခါး- 10 မီလီမီတာ၊ ကိုယ်ထည်-4မီလီမီတာ* 10 မီလီမီတာအစိုင်အခဲစတီးတုံး* MP-320 မှလွဲ၍ ထိပ်ရှိ ကက်ဘိနက်အသေး& MP-400* အတွင်းပိုင်းချိန်ညှိနိုင်သောစင်* စကားဝှက်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်အတွက် အနီရောင်ခလုတ်* AA ဘက်ထရီ4လုံး
* ပစ္စည်း: သံမဏိအရွယ်အစား- H800*W475*D430MM* လော့ခ်ချခြင်း- မျက်နှာပြင်ပါသော အီလက်ထရွန်းနစ်ဒစ်ဂျစ်တယ်သော့ခတ်ခြင်း။* အထူ- တံခါး- 10 မီလီမီတာ၊ ကိုယ်ထည်-4မီလီမီတာ* 30 မီလီမီတာအစိုင်အခဲစတီးတုံး* အတွင်းဘက် ချိန်ညှိနိုင်သော မှန်စင်* စကားဝှက်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်အတွက် အနီရောင်ခလုတ်* AA ဘက်ထရီ4လုံး
* ပစ္စည်း: သံမဏိ*အရွယ်အစား- H600*W400*D300MM* အထူ- တံခါး-4မီလီမီတာ၊ ကိုယ်ထည်- 1.5 မီလီမီတာ*လော့ခ်- လက်ဗွေရာ*လက်ဗွေရာ ပမာဏ- ၂၉* 10 မီလီမီတာအစိုင်အခဲစတီးတုံး*အပေါ်ဘက်တွင် သော့ခတ်နိုင်သောသေတ္တာ* အတွင်းပိုင်း ချိန်ညှိနိုင်သော စင်* စကားဝှက်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်အတွက် အနီရောင်ခလုတ်*4pcs AAA ဘက်ထရီ